Ahụike-Mgbatị Ahụ | Ka 2022
IBS na -eme ihere karịa STD, dị ka ọmụmụ ọhụrụ
Nnyocha ọhụrụ buru ibu achọpụtala na maka ndị mmadụ na -arịa ọrịa afọ ọria afọ (IBS), ikwu maka ọnọdụ ahụ adịghị mfe. Ọ bụ ezie na IBS bụ ihe a na -ahụkarị - na -emetụta ihe dị ka nde ndị America 35 - ọ na -esiri ọtụtụ ndị ike ịkọ isiokwu ebe ọ bụ na ihe mgbaàmà ahụ gụnyere mgbu afọ, afọ ntachi, afọ ọsịsa, afọ ọsịsa, afọ ọsịsa, na mkpagide, nke na -abụghị isiokwu gbasara mmekọahụ. N'ezie, nyocha ahụ chọpụtara na ndị na -aza ajụjụ anaghị enwe ahụ iru ala isoro ndị ọzọ na -akparịta ụka gbasara mmegharị afọ karịa ikwu gbasara ọrịa ndị a na -ebute site na mmekọahụ (STDs). N'ụzọ dị mwute, mgbe ndị nwere IBS na -ata ahụhụ na -agbachi nkịtị, ha anaghị enweta ọgwụgwọ ha chọrọ. Nnyocha ahụ - nke American Gastroenterological Association nyere ọrụ yana gụnyere ihe karịrị mmadụ 3,000 na -ata ahụhụ site na IBS na ndị dibịa karịrị narị atọ (ngosipụta zuru oke: Ironwood Pharmaceuticals na Allergan kwadoro ego nyocha ahụ) - chọpụtara na ọtụtụ ndị na -arịa IBS (67 pasent) na -ahụ ihe mgbaàmà afọ na eriri afọ ihe karịrị otu afọ tupu gị na dọkịta akparịta ụka, pasent 11 na -eche afọ iri ma ọ bụ karịa tupu ịrịọ maka enyemaka ahụike. Nke a abụghị n'ihi na ha achọghị enyemaka. Dabere na nyocha ahụ, ọtụtụ ndị na -arịa IBS (pasent 52) ​​kwuru na mgbaàmà ha na -enye nsogbu nke na ha ga -ahapụ caffeine (pasent 55), sel ha.
Foto ndị a nke ndị nne na -egosi na ara nwere ike ime ebe ọ bụla
Ezigbo ndị nne iri a na -egosi na ara nwere ike (na ekwesịrị) mee ya ebe ọ bụla ịchọrọ: site na Machị ụmụ nwanyị ruo na kichin.
Jess Weiner: 'Ịhụnanya ahụ m ọ fọrọ nke nta ka ọ gbuo m?'
Ruo ọtụtụ afọ, Jess Weiner gbara ụmụ nwanyị ume ka ha nabata ịdị arọ ha dịka ọ dị. Ya onwe ya, ọ bụ onye nwere obi ụtọ, nke na -aga nke ọma 18. Ma mgbe dọkịta ya dọrọ aka ná ntị na ibu ya nwere ike ibute ahụike, ọ ga -ajụ, sị: Ahụ ya ọ nabatara na -eme ya ọrịa? Nwere ike nke gị?
Ntụziaka adịghị esi nri siri ike iji mee izu ụka a, sitere na Katie Lee na Sunny Anderson
N'ịsọpụrụ ụbọchị nri nri mba ụnyaahụ, Katie Lee (onye dere tebụl nkasi obi: usoro nri maka oge ọ bụla) na Sunny Anderson (onye edemede nke Sunny's Kitchen: Easy Food for Real Life) jikọtara ya na New York Foundling-onye na-eweta ọrụ na-elekọta mmadụ. maka ụmụaka na ezinụlọ na-enye ndị nọ na usoro nlekọta nkuchi na obodo ndị nwere obere ego-ịkekọrịta nri dị mma, anaghị esi nri, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Know mara, ụdị nri nri anyị niile chọrọ karịa na ndụ anyị, n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ dị mfe - ha dịkwa mma. Ihe m na-ekwu bụ, lelee anya: Katie Lee's Veggie Taco Wraps Serves 6 1 nwere ike nwee agwa ojii, gbachapụ ma sachaa 1 teaspoon mmanụ olive 1 tablespoon taco na-eme ka nri tortillas ọka wit isii 1 iko shredded cheese 1 iko nwa akwụkwọ nri akwụkwọ nri ma ọ bụ letus Salsa In a obere efere, agwa agwa na mmanụ olive na taco sizinin. Gbasaa tablespoons ole na ole nke agwa n'etiti tortilla ọ bụla. N'elu elu ya na ngaji abụọ nke salsa, chiiz, na akwụkwọ nri. Nyefee akụkụ nke tortilla n'elu ndochi, malite na ala. Ghichaa ọnụ ya. Kechie otu mpempe wax ma bee ya ọkara. Kukumba Sunny Anderson na Salad oroma nke nwere ọmarịcha akwa painiapị na -ejere 4
Otu esi atụrụ ime nke ọma mgbe ịchọrọ
Soro usoro ndị a dị mfe iji nyere aka hụ na igwe na-eme nwa na-arụ ọrụ mgbe ịchọrọ ya.
Ndị nne na nna Olympic na -ekerịta ndụmọdụ ha kacha mma maka ụmụaka ha
Ọ ga -abụrịrị ọmarịcha mmetụta ịhụ nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị ka ọ na -asọmpi n'egwuregwu Olympic. Mana mgbe ụfọdụ ị ga -achọ ụdị ndụmọdụ ọ nweghị onye nchịkwa nwere ike inye - naanị nwe nne na nna gị nwere ike. Anyị jụrụ ndị nne na nna nke ndị na -eme egwuregwu Olympic nke afọ a ịkekọrịta ndụmọdụ kacha mma maka ụmụ ha na -asọmpi.
Nke a bụ ihe 'agụụ afọ' bụ nke onye ọ bụla na -ekwu maka ya
Ihe iju 'agụụ agụụ' ihe ị na -anụ maka ya n'izu a? Ọ dị adị. Ọ bụ mmega ahụ, mana ọ bụghị mmega ahụ mara mma: ị na -eku ume, na -ewepụ ikuku site n'afọ gị ka ị na -emechi eriri afọ gị ma na -a themụ ya na n'okpuru ọgịrịga gị. Ozugbo ị nọ ebe ahụ, ebumnuche bụ ijide ebe iji mee ka abdominis transversus sie ike, nke a makwaara dị ka akwara dị n'azụ ngwugwu isii gị (n'ezie ma ọ bụ usoro iwu) (ee, ndị ahụ dị). Ị nwere ike iche n'echiche ihe ahụ yiri, ọ dị mma? Ọ bụghị mara mma, na ókèala egwu. Mana ọ naghị akwụsị ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị na-ebuli ibu ibu site n'iji usoro ahụ. Ọ nọla kemgbe ọtụtụ afọ wee na -aga n'ihu na -ewu ewu n'ihi na ndị ọrụ na -eji nsonaazụ ya a swearụ iyi. 'Omume ndị a na -arụ ọrụ n'ihi na ị na -ejigide eriri afọ ruo ogologo oge,' ka ọkachamara ahụike na onye okike nke Brooklyn Bridge Boot Camp, Ariane Hundt na -ekwu. Mana ọ naghị adị nfe dịka ị na -a inụ afọ gị ugboro ole na ole n'izu. Ọ na -ekwu na ị ga -adorịrịrịrị ka ị hụ ezigbo nsonaazụ. 'Ime naanị mmega ahụ agaghị emepụta mkpọ isii,' ka Hundt na-ekwu. 'Inwe ike ịhụ abs bụ nsonaazụ nke nri dị ọcha, nke
Ihe 5 ga -eme na foduru Halloween (ewezuga ya)
Ọ bụrụ na ịchọtala onwe gị nnukwu efere swiiti, ihe aghụghọ ma ọ bụ ndị na-atọ ụtọ, ị nwere ike were otu maka otu ahụ rie ya n'onwe gị-mana enwere ezigbo ohere ahụ gị agaghị enwe ọ. ahụmịhe ahụ, n'agbanyeghị oke ọnụ gị na -ekwu n'ụzọ ọzọ. Yabụ kedu ihe ị ga -eji mee ka ahụ ike swiit Halloween gị dị ntakịrị? Nke a bụ ụfọdụ ihe ị ga -eme ugwu gị nke swiit foduru: Nye ya! Ndị ọrụ ebere Ronald McDonald House na -anabata onyinye nke swiiti ọbọp maka ndị ọrịa na ezinụlọ ha, ebe a na -echekwa nri na mba ahụ na -eme otu ihe ahụ. Ree ya! Enwere ohere siri ike na dọkịta ezé nọ na mpaghara gị ga -akwụ gị otu paụnd swiiti ị webatara. Ọ bụghị naanị na nke a na -egbochi anyị ịkwada ihe na -atọ ụtọ n'onwe anyị (ma nyere ezé anyị aka n'ime usoro) - a na -eji swiiti ahụ elekọta nchịkọta maka ndị agha site na Operation Gratitude. Chekwaa ya! E kwuwerị, ezumike na -abịa — nke ahụ pụtara kuki shuga na ụlọ gingerbread nke chọrọ ịchọ mma. Tinye swiiti n'ime akpa friza ma tụba ha ka ha jụrụ oyi. Jiri ya mee ọ dịkarịa ala ọgwụgwọ na -edozi ahụ! Ọ bụ eziokwu-usoro nri ndị a dị ịtụnanya (mara mma na ha ga na-atụba kichin m n'izu ụka a): * Ahụike Ọkara
Nri Nri Anyasị Ahụike Potluck nke dị mma ga -atọ ndị mmadụ ụtọ n'ezie
Oge ọzọ ị ga -aga nri abalị potluck, nwalee otu n'ime nri ndị a dị mma iji mejuo onye ọ bụla nọ n'ime ụlọ.
Ngwaahịa Ọdịmma 19 na -enyere anyị aka iwepu ya
Ọkwa nchekasị na-arị elu, ọ bụ ya mere anyị ji ekerịta ngwaahịa anyị ga-adị mma maka ibelata nrụgide. Zụọ ahịa 19, site na ngwakọta matcha ruo okwute lavender.
Ngwa Ngwa 5 bara uru nke ga -akwalite mgbatị gị - yana 3 ị chọghị
Ọtụtụ ngwa mgbatị ahụ na -ekwu na ha ga -akụ gị ihe, mana kedu nke bara uru ego gị? Anyị gafere n'akwụkwọ hype wee chọta ndị na -arụ ọrụ n'ezie.
Ọgwụ 4 nke nwere ike na -eme gị oke ibu
Ọ dịtụla mgbe ị na -eche banyere ọgwụ ndị a na -ejikarị emekarị nke nwere ike ibute oke ibu? Ndepụta ahụ, dịka otu ọkachamara ahụike kwuru ...
Ọgwụ dị ụtọ, dị mma maka ọdịda: Maple Cinnamon Roasted Mkpụrụ
Ndị a vegan maple cinnamon a nutsara n'ọkụ mkpụrụ osisi bụ nri dị ụtọ, na -esi ísì ụtọ na nri. Maple sirop na pawuda na -enye efere a ụtọ ụtọ ọdịda, ebe walnuts na mkpụrụ macadamia na -emeju gị protein, abụba dị mma, eriri, magnesium na ọtụtụ nri ndị ọzọ. Jiri mkpụrụ ndị a dị ụtọ tinye crunch na oatmeal ma ọ bụ yogọt, ma ọ bụ rie nri na ole na ole n'ọnọdụ nri ndị edoziri. Vegan Maple Cinnamon Roasteduts Na -eme iko abụọ Efrata 1 iko raw macadamia 1 cup raw walnut halves 3 tbsp. maple sirop 1/2 tsp. ala pawuda Ntụtụ nnu nnu, ka ị nụrụ ụtọ Gwakọta ihe niile dị na nnukwu efere. A na -atụba ya ka o wee yie uwe, wee gbasaa na mpempe achịcha rimmed juru na ya nke jiri akpụkpọ anụ kpuchie ya. Nri maka minit 20 ruo 25, ma ọ bụ ruo mgbe ọ na -esi ísì ụtọ na aja aja aja. Wepu ya na oven. Hapụ ya ka ọ dị jụụ tupu ị na -eje ozi.
Afọ ole ka ị dị mgbe ị tụfuru amaghị nwoke gị? Ihe ọ nwere ike ikwu gbasara ọrịa cancer gị
N'izu gara aga, edere m banyere ụdị akụkọ na -enye nsogbu nke HPV adịghị mma. Ọ dị nwute ịbụ onye na -agbada (ọzọ!), Mana ndị nyocha ewepụtala ụfọdụ nchọpụta ọhụrụ na -atọ ụtọ nke yiri ka ọ na -ejikọ afọ mbụ ị malitere inwe mmekọahụ n'ihe egwu gị maka ụdị ọrịa kansa, na -egbu egbu.
Ajụjụ Mmekọahụ: Enwere m ike ịgbanwe ka m ga -esi detụ 'ala ebe ahụ?'
Ezigbo Dr. Kate, enwere ụzọ ị ga -esi mee onwe gị ụtọ karịa 'ebe ahụ?'
The ose na -egbu gị Sex Drive?
Na -eme nri abalị n'abalị a? Dị ka ụfọdụ ndị ọkachamara si kwuo, ọ bụrụ na ị na-atụ anya iso nwa okorobịa gị rie nri abalị, ikekwe etinyekwala ose a na ofe gị-a na-akpọ ya mgbochi aphrodisiac!
Ntụziaka 4 na -atọ ụtọ maka Mọnde na -enweghị anụ
Ị dịla njikere maka ụfọdụ usoro nri na-abụghị anụ? N'ezie! Nke a bụ ụfọdụ ezi echiche enweghị anụ maka nri ehihie ma ọ bụ nri abalị-ụtọ na ahụike. Pizza Greek Dọkịta: Ọka Kalamata, galik, tomato ... ọtụtụ ụtọ! Isi mmalite: wholeliving.com site na Lexi na Pinterest Crimson Quinoa: Ejiri beets a mịrị amị, celery, yabasị ọbara ọbara, na lemon ... yum. Isi mmalite: fabfitfun.com site na Lexi na Pinterest Veggie Ratatouille: Akwukwo nri juru eju (yana jupụta!): Eggplant, zucchini, mushrooms, skwọsh odo, eyịm, na ose mgbịrịgba na -acha ọbara ọbara na odo. Isi mmalite: skinnyms.com site na Lexi na Pinterest Fava Bean Salad Salad: Ọtụtụ nnukwu protein na akwụkwọ nri - yana ntọala achịcha! Dị egwu. Isi mmalite: fitugar.com site na Lexi na Pinterest Ị na -eme 'Mọnde ndị anaghị eri anụ'? Kedu nri na-anaghị eri anụ kacha amasị gị (PS Ọtụtụ nri ebe a!) Foto: Pinterest
Phobias nzuzo na -atụ egwu ụmụ nwanyị (ma ọ bụ Halloween ma ọ bụ na ọ bụghị)
Ududo na germs na igwe mbuli elu-oh m! Ị nwere egwu? Ọ bụ ezie na ụjọ ụfọdụ na-adịkarị, ndị ọzọ nwere ike bụrụ ihe siri ike, na-atụ egwu, na-agbanwe ndụ-yana ikekwe ọbụna mkpụrụ ndụ ihe nketa. Anyị hụrụ phobias itoolu nke na -adịkarị n'etiti ụmụ nwanyị karịa ka ị ga -eche.
Jiri ọmarịcha njem atọ a mara mma maka ahụ dị njikere maka bikini
Ịchọrọ atụmatụ aghụghọ nke Bikini Boot iji mee ka ị dị njikere bikini site ugbu a ruo ụbọchị ọrụ? Mee usoro a (dabere na klas Erin Stutland's Shrink Session na mgbatị ahụ Crunch) ugboro anọ, ụbọchị atọ n'izu iji lekọta nke ahụ. 1. Mwepu akụkụ n'akụkụ A. Guzo na ikpere aka gbagọrọ ogo 90 na aka dị n'ihu gị, nkwụ n'ime; gbuo ikpere aka nri na itule n'ụkwụ aka ekpe, dịka egosiri. B. Wụgharịa gaa n'aka nri gị, na -agbada n'ụkwụ aka nri (debe ụkwụ aka ekpe n'ala). Nweta nguzozi gị ma megharịa, wụpụ aka ekpe. Mee anọ n'akụkụ ọ bụla. 2. Plié pịa A. Squat na plié sara mbara; gbuo ikpere aka ma bulie ọbụ aka elu n'akụkụ, dịka egosiri ya. B. Guzo, na -agbatị ogwe aka ruo ogo ubu, na -agafe ụkwụ aka nri n'azụ aka ekpe ma na -ebuli elu na mkpịsị ụkwụ. Kwụpụ ụkwụ ụkwụ aka nri azụ, laghachi na ịghaghachị wee megharịa, gafere ụkwụ aka ekpe n'azụ aka nri. Mee anọ n'akụkụ ọ bụla. 3. Bilie A. Guzo n'ụkwụ dị n'ubu n'iche, gbuo ikpere n'ala, na ọkpọ site n'ubu, wee wụlie elu elu, ogwe aka dị n'elu. B. Ala, gbatịa úkwù gị n'aka ekpe, bulie ikpere aka ekpe gị gaa n'ubu, dị ka egosiri ya. Laghachi ka ịmalite, ma megharịa akụkụ ọzọ. Mee anọ n'akụkụ ọ bụla. Ga -eme
Ị ga -enwe mmụọ mmụọ n'oge ọkọchị a. Enwere m ike ịtụpụta azịza ya?
Banye na mfu - anyị na -achọ mmechi. Nke a bụ otu esi ejikwa mmụọ mmụọ na -abịanụ nke ịhụnanya.
ihe aga eji aha aha bha peel
ezi onyinye maka ụbọchị nne